किन पर्दैछ, जसपाकाे समर्थन लिन कांग्रेसलाई हम्मे-हम्मे ? « Janata Samachar
किन पर्दैछ, जसपाकाे समर्थन लिन कांग्रेसलाई हम्मे-हम्मे ?
काठमाडौं । वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई संसदको महत्वपूर्ण दल जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन हम्मे/हम्मे पर्ने देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनको निर्णायक पहल शुरु गरेको कांग्रेसले शुक्रबार जसपाका नेताहरुसँग आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थनका लागि सहयोग माग्दा स्पष्ट जवाफ पाउन सकेन ।
सभापति शेरबहादुर देउवाकै सक्रियतामा माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुसँग कांग्रेसले सहयोग मागेपनि जसपाका नेताहरुले टालटुले जवाफ दिएका हुन । केपी शर्मा ओली सरकारप्रति निरन्तर नरम रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको आरोप लागेका देउवाले बालाएको बैठकमा माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेसको आग्रह सहर्ष स्वीकार गरेको छ ।
कांग्रेससँगको छलफलमा जनता समाजवादीका नेताहरुले पार्टीमा छलफल नगरी सहमति दिन नसकिने बताएका छन् । जसपाले कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाइ साथ दिएमा मात्रै देउवाको नयाँ सरकार बनाउने पहलकदमीले सार्थकता पाउने देखिन्छ । कांग्रेसको सहयोगको प्रस्ताबपछि जसपाका नेताहरुलाई पनि यसबारे निर्णय लिन दबाब बढेको छ ।
बैठकमा सहभागि नेताहरुका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सघाउन माओवादी र जसपासँग कांग्रेसले खुला प्रस्ताव राख्दा जसपाले निर्णय गर्न केही दिनको समय मागेको छ । जसपाले कांग्रेसको प्रस्ताबपछि पार्टी बैठक बोलाउने र फेरि ३ दलको बैठक बस्ने सहमति पनि भएको छ ।
कांग्रेस-जसपाबीच सहमतिको सम्भावना कति ?
जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सहकार्य गरेर जाने पक्षमा छ । तर कांग्रेस प्रस्ताबले अब कता लाग्ने भनेर कित्ता स्पष्ट पार्न यो समूहलाई पनि दबाब बढेको छ । जसपा नेता महन्थ ठाकुरले सरकार बदल्ने औपचारिक प्रस्ताव पहिलो पटक आएको र आफूहरु पार्टीमा छलफल गरेर चाँडै निर्णय पुग्ने बताउनुभएको छ ।
नेताहरुले पार्टीमा छलफल गरी कांग्रेसलाई जवाफ दिने बताए पनि वास्तबमा नयाँ सरकारबारे यो पार्टीमा स्पष्ट दुई धार छन् । नेताहरु महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओली सरकारसँगै सहकार्य गर्ने मनासायमा देखिन्छन् भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु ओलीलाई जसरी पनि विस्थापन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
नेताहरुको मनसाय जे भए पनि दुवै पक्षले जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरी लगायतका कार्यकर्ताको रिहाइको मुद्दालाई समर्थनको शर्त बनाउने गरेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा भने नेताहरुको अडानलाई बाहीरबाट हेर्दा कार्यकर्ता रिहाइ नै प्रमुख मागजस्तो देखिए पनि जसपाभित्रको आन्तरिक कहानी बेग्लै हुने गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
केही विश्लेषकहरुका अनुसार ओली र देउवामध्ये कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने सवालमा जसपा विभाजन नै हुन सक्छ । यसर्थ कांग्रेसको सहयोगको अपीललाई जसपाको एक पक्षले मान्न सक्ने तर सिंगो पार्टीले स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था नबन्न सक्छ ।